DAAWO SAWIRADA:Madaxweyne Xassan Sheekh, oo Warqadaha Aqoonsiga ka Guudoomay Danjirayasha Finland iyo Thailand – Hiiraanxog.net
HomeWararka SoomaaliaDAAWO SAWIRADA:Madaxweyne Xassan Sheekh, oo Warqadaha Aqoonsiga ka Guudoomay Danjirayasha Finland iyo Thailand
01/12/2015 Mohamed Abdi Saney Wararka Soomaalia 0
Xassan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaliya ayaa maanta warqadaha aqoonsiga danjirenimo ka guddoomay safiirrada dalalka Thailand iyo Finland u joogi doona dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaliya Mudane Xassan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horreyn warqadaha aqoonsiga ka gudoomay Danjiraha boqortooyada Thailand, Prasittiporn Wetprasit oo ah Safiirkii ugu horreeyay ee abid ay Thailand u soo dirto Soomaaliya, isagoo madaxweyne Xasan Sheekh soo gaarsiiyay dhambaal uu ka siday boqorka Thailand, Bhumibol Adulyadej.
Xasan Sheekh iyo danjiraha Thailand ayaa ka wadahadlay xiriirka muhiim ah oo dhex-mara labada dal, iyagoo isku af-garteen inay ka wada shaqeyaan mashaariicda caafimaadka, beeraha, waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada.
Madaxweynaha Soomaliya Xassan Sheekh Maxamuud ayaa Sidoo kale, warqadaha aqoonsiga kaga guddoomay danjiraha cusub ee dalka Finland wakiilka uga noqoneysa Somaliya, Tarja Orvokki Fernandez.
Madaxweynaha Somalia iyo danjire Fernanzez ayaa ka wadahadley xiriirka soo jireenka ah ee labada waddan, gaar ahaan adeegyadii caafimaad ee Finland ka fulin jirtay Soomaaliya, sida barnaamijkii dabar-goynta cudurka qaaxada ama TB-da.
Waxay kaloo labada mas’uul kawada hadleen arrimaha siyaasadda iyo amniga ee Somaliya, gobolka iyo caalamka intiisa kale.
Danjire Fernandez ayaa madaxweyne Xasan Sheekh soo gaarsiisay dhambaal ay ka siday madaxweynaha Finland, Sauli Niinistö, waxayna sheegtay in Finland ay si weyn u daney-neyso dib u soo nooleynta xiriirkii ay la lahayd Soomaaliya, isla markaana ay doonayaan inay sii xoojiyaan, siina ballaariyaan.
Madaxweynaha Somalia ayaa labada safiir ee Thailand iyo Finland u balanqaaday in DFS ay si buuxda ula shaqeyn doonto, una fududeyn doonto sidii ay waajibaadyadooda u gudan lahaayeen.
Ugu dambeyn, kulamadan waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Somaliya, Axmed Cali Kediye iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya